Gọvanọ Obianọ kpọrọ oku a n'Ogidi na mmemme Ito Arọ, bụ otu n'ime mmemme e jiri mara ndị obodo ahụ, ma bụrụkwa nke weere ọnọdụ n'ụlọ ezumeezu Ogidi dị n'okpuru ọchịchị Idemili North na ya bụ steeti. Ọ kọwapụtara mkpà ọ dị ka ndị Igbò na-akwàdo omenala ha, na-emeputa ha nke ọma ma na-echetakwa mmadụ mgbe ọ dị ndụ, karịa ịkwanyere onye ahụ ùgwù enweghị isi mgbe ọ nwụchagòrò.
O bunyere eze ọdịnala obodo ahụ ụkpa ekele, ya na ndị ọzọ niile nyere aka n'ịchịkọbà na ịhazi oke emume ahụ, ma kpọkukwazie ha ka ha jide ka ha ji, ọbụnadị dịka ọ kpọkùrù ndị Igbo ka ha were omenala ha kpọrọ ihe ma ghara ikwe ka nke ọbụla n'ime ya fuo ma ọ bụ nwụọ.
N'okwu nke ya, eze ọdịnala Ogidi, bụ Igwe Alex Ọnyịdo kọwara na mmemme ahụ bụ nke tegoro aka ndị obodo ahụ jiri mebe ya, bụkwa nke ha mechara gbahapụ ya nwa oge, ma kwuo na ya bụ mmemme gbànyèrè mgbọrọgwụ n'òtù ọgbọ dịka ọ dị n'ala Igbo.
Ọ sị na otu ọgbọ n'obodo Ogidi bụ nnọọ nke na-ada ụda nke ukwuu, ma bụrụkwa nke wetegoro ọtụtụ mgbanwe n'obodo ahụ dịka o siri metụta nrube isi, mmepe obodo na ịmà aka n'ime ezi ihe dara ụda, ọ kachasị n'ebe ndị ntorobịa obodo ahụ nọ.
A nọrọ na mmemme ahụ were kwanyere mmadụ ruru nàrị ise na asatọ ùgwù bụ ndị nọ n'agbata ahọ iri asatọ wee ruo ahọ iri iteghete, sitere na mpaghara anọ mejùpùtara Ogidi, nke gụnyere: Uru, Ezinkwọ, Ikenga na Akananọ.